शाकाहारी बन्नुस्, ७० लाख मानिसको ज्यान बचाउनुस् – Makalukhabar.com
शाकाहारी बन्नुस्, ७० लाख मानिसको ज्यान बचाउनुस्
विश्वका सम्पूर्ण मानिस शाकाहारी बन्ने हो भने सबैको आयु स्वतः बढ्ने देखिएको छ । यसकारण विश्वका सबै मानिस शाकाहारी बने जलवायु, वातावरण, हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा सुदृढ हुने अनुसन्धानकर्ताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । यससँगै मांसाहाकारीबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहे बर्सेनि ८० लाख मानिसहरूको ज्यान जोगिनेमा उनीहरूको एकमत छ । ।
१.सन् २०५० सम्म विश्वभरका मानिस शाकाहारी भए बर्सेनि कम्तीमा ७० लाख जीवको ज्यान जोगिनेछ। पशुपन्छीबाट उत्पादन हुने खानेकुरा खाँदै नखाने हो भने बर्सेनि कम्तीमा पनि ८० लाख मानिसको जीवन जोगिनेछ।
२. अक्सफोर्ड मार्टिन स्कुलको फ्युचर अफ फुड प्रोग्रामका अनुसन्धानकर्ता मार्को स्प्रिङ्म्यानका अनुसार खाद्य सामाग्रीबाट हुने ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशत घट्नेछ। उत्सर्जनमा आउने यो कमी रातो मासु ९रेड मिट०को उपभोग बन्द भएकाले हुनेछ। किनभने रातो मासु उत्पादन हुने पशुले मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्छन्।
५. पशुपालन र योसँग जोडिएको उद्योगमा संलग्नहरूले नयाँ काम खोज्नुपर्नेछ। उनीहरू खेतिपाती, बायोऊर्जा र निजी वनतर्फ लाग्न सक्नेछन् । उनीहरू कुनै अर्को नोकरी वा पेसामा जान नसके बेरोजगारको सङ्ख्यामा ठुलो वृद्धि हुनेछ। यसले समाजमा द्वन्द्व निम्तिनसक्छ।
७. विश्व नै शाकाहारी भए विभिन्न उत्सव र परम्पराहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। किनभने विश्वका अधिकांश मानिसले मनाउने उत्सव÷पर्वमा मासु प्रयोग गरिन्छ। कतिपय समुदायमा त विवाह र उत्सवमा मासु वा मासुका लागि पालिने पशु उपहार दिने प्रचलन छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका बेन फिलोङका अनुसार यसैकारण विश्वलाई शाकाहारीमा परिणत गर्ने प्रयास सफल हुँदैनन् ।
८. मासुको खपत नहुँदा मुटुसम्बन्धी रोग, मधुमेह, मस्तिष्कघात र विशेषखालका क्यान्सरबाट पीडित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। यसो भए औषधिउपचारमा खर्च हुने विश्वभर जिडिपीको २–३ प्रतिशत रकम पनि जोगिनेछ। तर, हामीले पोषणका केही वैकल्पिक खानेकुराले मासुलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले विश्वभर करिब दुई अर्ब मानिस कुपोषणग्रस्त भएको अनुमान गरिन्छ। खाद्यान्नको तुलनामा मासु र यसबाट उत्पादित खानेकुराबाट धेरै पोषण प्राप्त हुन्छ।”